सर्वसाधारणका लागि खुल्दै माथिल्लो तामाकोशीको आइपीओ,कहिले र कति खुल्दैछ ?::Hamrodamak.com
सर्वसाधारणका लागि खुल्दै माथिल्लो तामाकोशीको आइपीओ,कहिले र कति खुल्दैछ ?
काठमाडौं। माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजनाले सर्वसाधारणका लागि आइपीओ खुलाउने भएको छ। आयोजनाले यहि कात्तिक १५ देखि सर्वसाधारणलाई एक अर्ब ५८ करोड ८५ हजारको शेयर बिक्री गर्दैछ ।
बिक्री प्रबन्धक नागरिक लगानी कोषका सेयर बाँडफाँट शाखा प्रमुख रोशन जंग कार्कीका अनुसार स्थानीयलाई बिक्री गरिएको आइपीओ बुधबार बाँडफाँट हुनेछ भने नयाँ खुल्ने आइपीओमा यसअघि भरेका स्थानीयले दोहोर्याएर सेयर भर्न पाउने छैनन। आइपीओको बिक्रि मूल्य प्रत्ति कित्ता १०० पर्ने र न्युनतम ५० देखि अधिकतम १००० कित्ता सम्मको सेयरको लागि आवेदन दिन पाउनेछन। बिहीबारबाट खुल्ने आइपीओ १९ गतेसम्म भर्न सकिनेछ।